ကတိတစ်ခုကိုပေးပြီးသွားရင် – Trend.com.mm
Posted on April 19, 2018 April 19, 2018 by Wint
” ကတိ ” ဆိုတာပါးစပ်က လွယ်လွယ်လေးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာ တည်ကြည် လေးနက်မှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ကတိတစ်ခုကို လွယ်လွယ်လေးဖြတ်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ? ကတိပေးတဲ့လူရဲ့  ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာပဲထိခိုက်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ကတိတစ်ခုကို မပေးခင် ကိုယ်ဒါကိုလုပ်နိုင်လား ? သေချာလား အဆုံးထိတည်သွားနိုင်လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ… ကတိတစ်ခုပြတ်သွားရင် နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေပါလာလည်းဆိုတော့ သာဓကလေးတစ်ခုနဲ့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်
အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၇)နှစ်ကြာတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့အပြုအမူတွေ ပြောင်းလဲလာ
တာကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေလည်း မချက်တော့ဘူး။ အမြဲတမ်း အလုပ်မှာအဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးနေကြ စကားသံတွေလည်း တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာကြာပြီ။ ကလေးတွေကိုပဲသူကြည့်ပြီး ရယ်ပြ၊ ပြုံးပြတော့တယ်။ ကျွန်တော့်အပေါ် တဖြည်းဖြည်းအေးတိအေးစက်နိုင်လာတယ်ဗျာ..
အတူတူရှိနေရဲ့နဲ့ မပျော်ရွှင်၊ ငြီးငွေ့နေရတဲ့ဘဝကြီးကို ကျွန်တော်မြန်မြန်အဆုံးသတ်ချင်
ပြီ။ အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်….
” ကွာရှင်းခြင်း ”
အဖေ့ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း ဒီလိုပြောပြလိုက်တယ်…
” အဖေ ကျွန်တော့်မိန်းမ အမူရာတွေက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး ..တဖြည်းဖြည်းသွေးအေး
အဖေက ” ငါမင်းကို အကြံတစ်ခုပေးမယ် ”
‘‘ မင်းတို့နှစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ကို မှတ်မိသေးလား.. ? မင်းသူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့ ကတိစကားတွေကို ပြန်စဉ်းစား… အဲ့ဒီကတိတွေကိုရော မင်းဘယ်လောက် ဖြည့်ဆည်းပြီးသွားပြီလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့် ”
ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေက ခေါင်းထဲမှာ အစီအရီပြန်ပေါ်လာတယ်. . .
” ကျွန်တော့်ရဲ့နှလုံးသား တစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီး သူ့ကို ကျွန်တော်ချစ်သွားပါ့မယ် အမှားတွေ ၊ အပြစ်နာဆာတွေကိုလည်း နားလည်သည်းခံပေးမယ် .. သစ္စာရှိရှိနဲ့ ဘေးနားကနေ ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်…. မိသားစု စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုကသာ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး ဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ နာမကျန်းသည်ဖြစ်စေ ၊ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ၊ ကျရှုံးသည်ဖြစ်စေ … သက်ဆုံးတိုင်ထိ သေအတူ ရှင်မကွာလက်တွဲသွားမယ်လို့ ကတိသစ္စာပြုပါတယ်… ”
” အဲ့ဒီကတိတွေကို မင်းဘက်ကဆက်ပြီး မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့
မင်းသဘောပဲ.. ဘာမှမပြောင်းလဲသွားဘူးထင်ရင်တော့ မင်းကွာရှင်းနိုင်တယ် ” တဲ့။
ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ။ အဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီး ဖုန်းခဏချလိုက်
ကာ အိမ်ထောင်သက်တမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော့်လုပ်ရပ်တွေအားလုံး ပိတ်ကားချပ်မှာ
ပြနေသလိုမျိုး တရွေ့ရွေ့မြင်ယောင်လာတယ် ။ ကျွန်တော် မတည်နိုင်ခဲတဲ့ ကတိတွေအများ
သူမ အိမ်သန့်ရှင်းလုပ်နေချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေခဲ့တယ်။
အိမ်နောက်ဖေးမှာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေချိန် ဝိုင်းမကူပေးဘဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို တီဗီအေးဆေးကြည့်နေမိခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ ကလေးတွေထိန်းရလို့ ပင်ပန်းနေချိန် ကျွန်တော် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရယ်မောပျော်ပါးနေမိခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မဟုတ်ဘူး… အပတ်တိုင်းလိုလို (၉)နာရီကျော်မှ အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ရက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီတော့မှ ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်လောက်ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲပြီး ကလေးတွေအတွက် ဖခင်ကောင်းမပီသလဲဆိုတာတွေးမိသွားတယ်။ ဒီလိုနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ ငါပြောင်းလဲမှဖြစ်မယ် ။ အခုချိန်ကစပြီး
တစ်ညနေ ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်တယ်။ ရတနာဆိုင် တစ်ဆိုင်
သွားပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမအရမ်းလိုချင်နေခဲ့တဲ့ ဆွဲကြိုလေးတစ်ကုံး ဝယ်လာလိုက်တယ်။
ညရောက်တော့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဒိတ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော့်ခေါင်မိုးထပ်ပေါ်မှာ လုပ်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်။ ရှန်ပိန် ၊ ပန်းစည်းလေးတွေ၊ ဂန္တဝင်တေးသီချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့။ သူမအရမ်းကြိုက်တဲ့ ဟင်းလျာကိုလည်း ကျွန်တော်ချက်ကျွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလပိုင်းအတွင်း မိန်းမက ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြလာတယ်။ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်လာရင် ပြုံးရွှင်ပြီး ကြိုဆိုတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေကိုလည်း မကြာခဏချက်ပေးလာတယ်။
တစ်ရက် ကျွန်တော်တို့ ထမင်းစားပြီးတော့ ပန်းကန်တွေအတူတူဆေးနေချိန် မိန်းမကပြောတယ်။
‘‘ ရှင့်ရဲ့ဒီလိုပုံစံကို ကျွန်မလွမ်းနေခဲ့တာကြာပြီ… ချစ်တယ် ”တဲ့ ။
သူမဒီလိုပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ မိန်းမမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကျေနပ်မိတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အဖေနဲ့စကားပြောဖြစ်သွားတာလည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်မိတယ်။
သူမ နဖူးကို ကျွန်တော်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်ပြီး ” တောင်းပန်ပါတယ် မိန်းမရယ်.. ”
သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ကံတရားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ၊ အတွေးပေါင်းများစွာ ၊ သည်းခံမှုများစွာ ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ ဆုတောင်းတွေ ၊ လေးစားမှုတွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ရပြီး ခင်ပွန်းနဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ကြားမှာ ထားရှိတဲ့ ခိုင်မြဲကြံ့ခိုင်တဲ့ ကတိသစ္စာပြုမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။
အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ … <3
” ကတိ ” ဆိုတာပါးစပျက လှယျလှယျလေးပေးလိုကျရတယျဆိုပမေယျ့ သူ့မှာ တညျကွညျ လေးနကျမှု၊ သစ်စာစောငျ့သိမှုတှပေါဝငျနပေါတယျ။ ကတိတဈခုကို လှယျလှယျလေးဖွတျလိုကျတော့ ဘာဖွဈလဲ ? ကတိပေးတဲ့လူရဲ့ကိုယျ့ကငျြ့သိက်ခာပဲထိခိုကျပါတယျ… ဒါကွောငျ့ ကတိတဈခုကို မပေးခငျ ကိုယျဒါကိုလုပျနိုငျလား ? သခြောလား အဆုံးထိတညျသှားနိုငျလားဆိုတာ စဉျးစားပါ… ကတိတဈခုပွတျသှားရငျ နောကျကှယျမှာဘယျလိုအကြိုးဆကျတှပေါလာလညျးဆိုတော့ သာဓကလေးတဈခုနဲ့ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ
အိမျထောငျသကျတမျး (၇)နှဈကွာတော့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမရဲ့အပွုအမူတှေ ပွောငျးလဲလာ
တာကို သတိထားမိခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောကွိုကျတဲ့ ဟငျးတှလေညျး မခကျြတော့ဘူး။ အမွဲတမျး အလုပျမှာအဆငျပွရေဲ့လားလို့ မေးနကွေ စကားသံတှလေညျး တိတျဆိတျနခေဲ့တာကွာပွီ။ ကလေးတှကေိုပဲသူကွညျ့ပွီး ရယျပွ၊ ပွုံးပွတော့တယျ။ ကြှနျတေျာ့အပျေါ တဖွညျးဖွညျးအေးတိအေးစကျနိုငျလာတယျဗြာ..
အတူတူရှိနရေဲ့နဲ့ မပြျောရှငျ၊ ငွီးငှနေ့ရေတဲ့ဘဝကွီးကို ကြှနျတျောမွနျမွနျအဆုံးသတျခငျြ
ပွီ။ အဆုံးသတျဖို့အတှကျ နညျးလမျးကတဈခုပဲရှိတယျ….
” ကှာရှငျးခွငျး ”
အဖကေို့ ဖုနျးချေါပွီး ကြှနျတေျာ့ဆုံးဖွတျခကျြအကွောငျး ဒီလိုပွောပွလိုကျတယျ…
” အဖေ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အမူရာတှကေ ပုံမှနျမဟုတျတော့ဘူး ..တဖွညျးဖွညျးသှေးအေး
အဖကေ ” ငါမငျးကို အကွံတဈခုပေးမယျ ”
” မငျးတို့နှဈယောကျ မင်ျဂလာဆောငျကို မှတျမိသေးလား.. ? မငျးသူ့ကိုပွောခဲ့တဲ့ ကတိစကားတှကေို ပွနျစဉျးစား… အဲ့ဒီကတိတှကေိုရော မငျးဘယျလောကျ ဖွညျ့ဆညျးပွီးသှားပွီလဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ ”
ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတှကေ ခေါငျးထဲမှာ အစီအရီပွနျပျေါလာတယျ. . .
” ကြှနျတေျာ့ရဲ့နှလုံးသား တဈခုလုံးနဲ့ရငျးပွီး သူ့ကို ကြှနျတျောခဈြသှားပါ့မယျ အမှားတှေ ၊ အပွဈနာဆာတှကေိုလညျး နားလညျသညျးခံပေးမယျ .. သစ်စာရှိရှိနဲ့ ဘေးနားကနေ ပံ့ပိုးပေးသှားမယျ…. မိသားစု စိတျခမျြးသာ ပြျောရှငျမှုကသာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ပထမဆုံး ဦးစားပေးဖွဈတယျ။ ကနျြးမာသညျဖွဈစေ နာမကနျြးသညျဖွဈစေ ၊ အောငျမွငျသညျဖွဈစေ ၊ ကရြှုံးသညျဖွဈစေ … သကျဆုံးတိုငျထိ သအေတူ ရှငျမကှာလကျတှဲသှားမယျလို့ ကတိသစ်စာပွုပါတယျ… ”
” အဲ့ဒီကတိတှကေို မငျးဘကျကဆကျပွီး မထိနျးသိမျးနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့
မငျးသဘောပဲ.. ဘာမှမပွောငျးလဲသှားဘူးထငျရငျတော့ မငျးကှာရှငျးနိုငျတယျ ” တဲ့။
ကြှနျတျောသဘောပေါကျသှားပွီ။ အဖကေို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျပွောပွီး ဖုနျးခဏခလြိုကျ
ကာ အိမျထောငျသကျတမျးတဈလြှောကျ ကြှနျတေျာ့လုပျရပျတှအေားလုံး ပိတျကားခပျြမှာ
ပွနသေလိုမြိုး တရှရှေ့မွေ့ငျယောငျလာတယျ ။ ကြှနျတျော မတညျနိုငျခဲတဲ့ ကတိတှအေမြား
သူမ အိမျသနျ့ရှငျးလုပျနခြေိနျမှာ ကြှနျတျောကတော့ ဆိုဖာပျေါထိုငျပွီး သီခငျြးနားထောငျနခေဲ့တယျ။
အိမျနောကျဖေးမှာ ခကျြပွုတျကွျောလှျောနခြေိနျ ဝိုငျးမကူပေးဘဲ ကိုယျနဲ့မဆိုငျသလို တီဗီအေးဆေးကွညျ့နမေိခဲ့တယျ။ အိမျမှာ ကလေးတှထေိနျးရလို့ ပငျပနျးနခြေိနျ ကြှနျတျော အပွငျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရယျမောပြျောပါးနမေိခဲ့တယျ။ တဈခါတဈလေ မဟုတျဘူး… အပတျတိုငျးလိုလို (၉)နာရီကြျောမှ အိမျပွနျနောကျကတြဲ့ရကျတှေ ရှိခဲ့တယျ။
အဲ့ဒီတော့မှ ကြှနျတျောဟာ ဘယျလောကျဆိုးသှမျးမိုကျမဲပွီး ကလေးတှအေတှကျ ဖခငျကောငျးမပီသလဲဆိုတာတှေးမိသှားတယျ။ ဒီလိုနလေို့တော့ မဖွဈဘူး။ ငါပွောငျးလဲမှဖွဈမယျ ။ အခုခြိနျကစပွီး
တဈညနေ ကလေးတှနေဲ့ ကြှနျတျောလမျးလြှောကျထှကျဖွဈတယျ။ ရတနာဆိုငျ တဈဆိုငျ
သှားပွီး ကြှနျတေျာ့မိနျးမအရမျးလိုခငျြနခေဲ့တဲ့ ဆှဲကွိုလေးတဈကုံး ဝယျလာလိုကျတယျ။
ညရောကျတော့ ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ဒိတျလေးတဈခု ကြှနျတေျာ့ခေါငျမိုးထပျပျေါမှာ လုပျဖို့ စီစဉျလိုကျတယျ။ ရှနျပိနျ ၊ ပနျးစညျးလေးတှေ၊ ဂန်တဝငျတေးသီခငျြးလေးတှနေဲ့ပေါ့။ သူမအရမျးကွိုကျတဲ့ ဟငျးလြာကိုလညျး ကြှနျတျောခကျြကြှေးဖွဈခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီလပိုငျးအတှငျး မိနျးမက ကြှနျတေျာ့ကိုပွုံးပွလာတယျ။ အလုပျကနေ အိမျပွနျလာရငျ ပွုံးရှငျပွီး ကွိုဆိုတယျ။ ကြှနျတျောကွိုကျတတျတဲ့ ဟငျးတှကေိုလညျး မကွာခဏခကျြပေးလာတယျ။
တဈရကျ ကြှနျတျောတို့ ထမငျးစားပွီးတော့ ပနျးကနျတှအေတူတူဆေးနခြေိနျ မိနျးမကပွောတယျ။
” ရှငျ့ရဲ့ဒီလိုပုံစံကို ကြှနျမလှမျးနခေဲ့တာကွာပွီ… ခဈြတယျ ”တဲ့ ။
သူမဒီလိုပွောလိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့မှာ ဒီလောကျကောငျးတဲ့ မိနျးမမြိုးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရထားတဲ့အတှကျ ဝမျးသာကနြေပျမိတယျ။ အဲ့ဒီနကေ့ အဖနေဲ့စကားပွောဖွဈသှားတာလညျးကံကောငျးတယျလို့ထငျမိတယျ။
သူမ နဖူးကို ကြှနျတျောဖှဖှလေး နမျးလိုကျပွီး ” တောငျးပနျပါတယျ မိနျးမရယျ.. ”
သာယာခမျြးမွတေဲ့ အိမျထောငျရေးဆိုတာ ကံတရားနဲ့ မဆိုငျပါဘူး။ ပေးခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှေ ၊ အတှေးပေါငျးမြားစှာ ၊ သညျးခံမှုမြားစှာ ၊ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ ၊ ဆုတောငျးတှေ ၊ လေးစားမှုတှကေို ရငျးနှီးမွုပျနှံခဲ့ရပွီး ခငျပှနျးနဲ့ ဇနီးသညျရဲ့ကွားမှာ ထားရှိတဲ့ ခိုငျမွဲကွံ့ခိုငျတဲ့ ကတိသစ်စာပွုမှုတှကွေောငျ့ပါပဲ။
အားလုံး ပြျောရှငျခမျြးမွတေဲ့ မိသားစုဘဝလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ … <3
ခြေဖ၀ါးမှာ ကြက်သွန်နီကပ်ပြီးအိပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ?